Famandrihana betsaka amin'ny fandrahoana an-dakozia boribory Mampiasà Dispenser tavoahangy menaka oliva poakaty 210ml
1) Dispenser tavoahangy menaka oliva dia vita amin'ny vera avo lenta, vava tavoahangy lehibe savaivony mora raisina amin'ny endrika tsara tarehy.
Famolavolana haitraitra tsara kalitao Extra Virgin Square Foana fitaratra tavoahangy menaka oliva 170ml tavoahangy menaka oliva dispenser
* Dispenser menaka oliva vera vita amin'ny vera tsy misy firaka, kalitao avo lenta ara-barotra, rindrina matevina, fanorenana mateza ary endrika mazava kristaly.
* Madio kristaly mba hahafantaranao ny masiaka sy ny malemy.Manana endrika efajoro tsy manam-paharoa sy mitsitsy toerana, manome lafiny 4 ho an'ny fametahana.
* Ny tavoahangy tsirairay dia misy plug anaty plastika sy satroka visy plastika, natao hifanaraka tsara mba hanafoanana ny fivoahana sy hihazonana ny havaozin'ny vokatra.
* Safidy fonosana tonga lafatra ho an'ny menaka oliva, vinaingitra, saosy, siropia, akanjo, zava-pisotro, fanahy ary semi-viscous hafa
tavoahangy menaka oliva tsy misy na inona na inona amin'ny satroka 250ml 500ml 750ml 1L tavoahangy vera efamira maitso ho an'ny menaka oliva
Mba hitazonana ny menaka oliva ho vaovao - Ny vata fampangatsiahana menaka oliva dia mitazona ny menaka oliva amin'ny tara-masoandro izay mahatonga ny fotoana fitehirizana maharitra.Ny satroka fotsy anatiny sy ny satroka visy mainty dia mahatonga azy io ho tsara amin'ny fitazonana ny rivotra.
Set Dispenser menaka oliva tsara tarehy - Ny tavoahangy dia misy tsipika mipetaka manamora ny famoahana ny menaka ilainao.Ny menaka ao anatin'ny habetsaky ny soso-kevitra isan'andro dia mahatonga ny sakafo ho salama kokoa.
Refill Friendly - Ny kitapo dia misy fantsom-baravarankely vy, manampy amin'ny famenoana sy famenoana ny menaka / vinaingitra mora foana tsy misy leaka.Ataovy madio ny latabatra sy ny tananao.
Lisitry ny fonosana - Tavoahangy solomaso maitso x 1 pc;Cap anatiny + Cap screw x 2 pcs;Fantsona x 1 pc;Pourer misy satroka x 1 pc;Pourer miaraka amin'ny flap cap x 1 pc;Label mainty x 2 pcs
Mpanamboatra ambongadiny 160ml Kitchen fandrahoan-tsakafo azo hanina menaka oliva tavoahangy vera
* Tavoahangy menaka vera no mety tsara hotehirizina tsara sy hanaparitahana ny menaka oliva sy ny vinaingitra mba hiantohana ny menakao haharitra ela kokoa.
* Tavoahangy menaka vera koa dia azo ampiasaina hitahirizana ireo zava-pisotro tianao indrindra, toy ny divay.Tsara ho an'ny trano fisakafoanana, trano fisotroana, sakafo
serivisy, ary koa ny fampiasana an-trano.
* Tsara ho an'ny fitrandrahana lavanila, menaka, lotionana, akanjo salady vita an-trano, vinaingitra, ho an'ny filanao orinasa sy ny maro hafa
* Haingo ny tavoahangy miaraka amin'ny etikety mahazatra anao ary tsara ho an'ny fanomezana, fanomezana rehetra
* Misy satroka visy mainty.Afaka mandatsaka sy manaparitaka menaka tsy misy leaka ny rehetra, mifehy tsara ny fampiasana menaka.
Ambongadiny 170ml Kitchen Mampiasà menaka oliva menaka voanjo tavoahangy fitaratra efamira misy satroka aluminium
Tavoahangy vera tsy misy menaka / siny miaraka amin'ny satrony ho an'ny sakafo
6) Haavo 15.8cm, savaivony 4.7cm, savaivony vavan’ny tavoahangy2.6cm.lanja 227g.
105ml Kitchen fandrahoan-tsakafo menaka oliva tavoahangy fitaratra misy metaly nozzle
Tavoahangy mahandro 100ml Tavoahangy menaka oliva vera misy satroka aluminium
Varotra mafana 210ml Boribory menaka oliva organika tavoahangy tavoahangy fitaratra amidy ambongadiny
tavoahangy diffuser volotara, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, tavoahangy vera labiera, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy ranom-boankazo, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo,